::: Somalitalk.com Online :::::
XAQIIQADII OGAANNAYE, XALKA MA U ISTAAGNAA?????
Waxaa mahad leh Ilaahay, naxariis iyo nabadgelyana Nabi Maxamed korkiisa ha ahaato.
Qofkasta oo Soomaali ah, meeshuu rabo dunida ha uga noolaadee wuxuu ka dheregsanyahay halka xaaladda dadka iyo dalka Soomaaliyeed marayso. Waa xaqiiqo murugo leh oo aan gacmaheenna ku kasbannay. Waxaa inaka maqan oo aan baahi weyn u qabnaa waa caddaalad, sharaf, nolol iyo nabadgelyo. Afartaa shay oo aan la'aantood bulsho ama ummadi jiri karin, ayaa Soomaalidu weligeedba baadigoob ugu jirtay, welina ugu jirtaa. Illamaa waqtigii qaar ka mid ah Soomaalida ay xornimada qaateen ee gumeysigii caddaa ka guurey dalkooda waxaa meelkadhac weyn iyo xadgudub loo geystay caddaaladdii, sharaftii, noloshii iyo ugu danbeyntii oo nabaddii faraha ka baxday.
SOOMAALI WAA TUMA? MAXAASE KA DHEXEEYA?
Inkastoo aanan takhasus u lahayn cilmi baaris dheerna aanan ku sameyn isir-raaca iyo abla-ablaynta Aadanaha, ayaan haddana waxaan rumeysanahay in Soomaalidu guud ahaan ay isku isir tahay oo hal cunsur ka soo jeeddo. Waxay kaloo wadaagaan dhaqanka – waa xoolo dhaqato, beeralley ama kalluumeysato, gabdhaha waa la baxaan, caruurta waa gutaan, xoolaha waa gowracdaan intaysan qalan ka hor, martida waa sooraan, qabiilooyinna waa isu diriraan. Waxaa kaloo guud ahaan ka dhexeeya oo ay ka siman yihiin luuqadda, diinta iyo deegaanka oo hal buqco ama gees ayey dunida uga noolyihiin. Waxaa taariikhdu qoreysaa in ay weligood isku cadow ahaayeen isuna gurmanjiriin markii dibadda looga soo xadgudbo – balse ay dagaallami jireen markii roobku da'o ee xooluhu u dhalaan ama beertu soo go'do iyo markii dawlad la dhisayo ee wasiirada la qaybsanayo ee kuraasta iyo maamulka loogu qamaamo sidii baadka ama cawskii xoolaha oo kale.
MAXAA QALDAMAY MAXAASE LAGU SUGANYAHAY HADDA??
Ka hor xornimaddii Soomaalida qaarkood qaateen 1960kii, kolkii jiilaalku bilowdo qabiiloowinku waa kala guuri jireen oo qoloba meel bay u dhacar iyo cows doonan jirtay. Haddii dagaal socday oo intii roobka iyo barwaaqada lagu jiray dirir iyo colaad oogantay waa la joojin jiray inta roobka dambe laga gaarayo si xoolaha jiilaalka looga soo saaro. Kolkii dawladnimada la qaatay cawskii (kuraastii iyo maamulkii) hal meel ayaa la isugu keenay qabiilooyinkii oo dhanna geesaha ayey kasoo fariisteen, kadibna sidii caadada u ahayd hadba tii xoog roon ayaa ceelka cabbaysay cawskana guraneysay. Lama qorin ama waqti looma helin lagu diyaariyo dastuur iyo nidaam lagu maamulo hannaanka dawladnimo, kaas oo saldhig looga dhigo caddaalad, xaqdhawr iyo nabad kuwada noolaansho. Kadib markii dawladdii burburtay ee jiilaal xun dhacayna waa la kala guuray oo qoloba meel bay u hayaan raacday, colaaddiise ma joogsan ee labadii meel wada degtayba dirirtii iyo habarwacashadii ayey halkoodii kasii wadeen.
MA LA KALA MAARMAA MAXAASE NALA GUDBOON??
Ninkii sooyaalka soo jireenka ah ee Soomaalida akhriyey, silica ay hadda ku noolyihiinna u kuurgalay, samanka iyo sansaanka adduunku ku socdana u fiirsada wuxuu ogaanayaa in Soomaalidu aysan kala maarmin. Waxaa xaqiiq ah oo qof walbaa u jeedaa in Soomaali meel ay joogtaba ay soomaali tahay, isku duruuf tahay, isku doonna saarantahay. Waxaan muddo hadda laga joogo shan bilood soo maray magaalada Hargeysa anigoo ka imid dhinaca Boosaaso, waxaan la socday Diyaaradda Daalo ee ayada aan cidi isku haysan meeshay rabtana cowska ka gurata – ciiloow way!! Yaa dalkoo dhan sida Daalo, Barakaad, Dahabshiil, Gallad iyo Amal miskaxdooda ku maamula. Kolkii aan magaalada Hargeysa kasoo dhoofaynay ayaan sidaas u jalleecay madaxdii iyo dadweynihii diyaaradda fuulayey, mise qof walba wuxuu gacanta ku haystaa ama jeebka sare ugu jira baasaboorkii xiddigta shangeeska ah iyo calanka buluugga ah lahaa. Dadkaas diyaaradda raacayey waxaa ku jiray sida aan sheekada ka dhexmaqlayey madax sare oo heer wasiir ah oo ka tirsan maamulka Somaliland. Tusaale kale oo muujinaya in Soomaalidu isku dantahay waxaa weeye xannibaaddii lagu soo rogay dhoofinta xoolaha nool ee Soomaalida iyo tii ugu danbeysay ee lagu soo rogay baasaboorka Soomaalida (Dubai, Kenya iyo Ethiopia). Dhammaan arrimahaasi si isle'eg ayey u saameeyeen Soomaalida meelkasta oo ay dalka kajoogaan ama dibadda uga suganyihiin. Qaxootiga warkiis ha sheegin isagu ma kala laha reer hebel iyo reer Land ee waa Soomaali, inta badanna hadba reerkii suuq leh baa la isku dhiibaa ( Isaaq, Daarood, Barawaanni iyo markii ugu danbeysay oo Jareer weyne la isku dhiibayey).
Dhacdadii ugu danbeysay waxay ahayd middii ka dhacday shirkii Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ku laaheen magaalada Nairobi dhowr cisho ka hor, kadib markii xoghayntii shirku ku wargelisay in C/laahi Yuusuf ku hadlo luuqad aan ahayn Afka Soomaaliga waayo " Afsoomaaligu uguma jirin luuqadaha ay tarjumi kareen ". Haddii si kale loo dhigo waxaa halkaas laga fahmayaa in Afka Soomaaliga lagu ku jirin liiska luuqadaha ee Qaramada Midoobay. Waxaa taas ku xigidoonaana waa in laga saaro calanka Soomaalida calamada Qaramada Midoobay, kadibna khariiddada Soomaalida laga saaro tan qaaradaha adduunka!!. Waxaa habboon oo dan inoogu jirtaa haddii aan nahay Soomaali in aan inta xurgufta iyo xasadka dhexdeenna ah meel iska dhigno u istaagno sidii aan u badbaadsan lahayn jiritaankeenna. Marka aan hadafkaas gaarno aan u soo noqonno xisaabtanka dhexdeenna ah.
Dhammaan tusaalooyinkaasi waxay muujinayaan in Soomaali Soomaali tahay, mustaqbalkeedu mid yahay, noloshoodu isku xirantahay, xalka iyo wax qabadkuna ku imaan karo in la fahmo duruufahaas, danta guud iyo tan gaar ahaaneedna laga wada hadlo.
Ugu danbeyntii waxaan Soomaalida xusuusinayaa maahmaahda oranaysa " Rag waxaa u liita: Matashade, Matoshe iyo Matashiishe", waxaad mooddaa in aan saddexdaas arrimoodba ku sifownay haddii aan nahay Soomaalida maanta. Walaalayaal xalku kuma jiro colaad, xafiiltan iyo is xag-xagasho aan dhammaad lahayn. Kulligeen waan isku raacsannahay in caddaalad darro dhacday oo la isku xadgudbay, la is laayey, la isu gafey. Waxaan kaloo isku raacsannahay in aan la kala maarmin oo dani isku keen xirayso, haddaba miyeysan habboonayn in inta la ishorfariisto lawada xaajoodo, la xisaabtamo, la is xaalmariyo, kadibna si xalaal ah loo wada noolaado. In lawada noolaan karo waxaa tusaale inoogu filan Daalo,Damal, JubbaAir, Dahabshiil, Mustaqbal, Amal, Gallad, Barakaat oo aan rajeynayno in ay kaalinteedii dib ugu soo noqoto idanka Alle, iyo guud ahaan sida shacabka Soomaaliyeed isugu xiranyahay xag ganacsi, xag guur iyo xag kastaba. Waxaan ku soo xirayaa qayb ka mid ah gabaygii Gobannimo:
Dana gaara niman maagan baa geedigaan wada’e
Haddii shacabku uu kala go’ rabo oon lakala geynin
Ama guun colaadihi jirtoo laysu gali waayey
Garbahaaray illamaa Berbara kalama goosheene
Gabdhaheenna oo uguba baa gaal hollinayaaye
Gayaankood ma aha oo cidlay goosan ka heleene
Geesiyaal hadday leeyihiin lama guhaadsheene
Axmed gurey raggiisii ayaan joogin gobalkaane
Gaban iyo barbaar iyo waayeel guudka ka cireystay
Geela kii la joogiyo midkii guunyo adhi heystay
Magaalada midkii galay midkii falayey goofkiisa
Gacan qabad ayey sugahayaan gelinka maantaahe
Afartooda gees qaaradaha kii ku galay tuugmo
Hurdo gama’ masiiyoo intaas waa gocanayaane
Gadaal buu intaas eegayaa goor iyo ayaane
Guryo noqosho buu dhawrayaa geeri ka horowe
Ninkii godob tirsanayiyo ninkii gacan-togaaleeyey
Ninkii guray hantida qaran ninkii calanka googooyey
Ninkii goostay gobalkiisa iyo kii ged kale maagan
Ninna guul masoo hoyn oo intuba waa gablan u jooge
Intay goori goortahay haddaan cidi kasoo gaarin
Indheer-garad nadiifiyo haddaan geesi u istaagin
Garmaqaatayaashiyo laqaban gacan ku dhiigleyda
Geyigeenna waa loo baqaa gebi ahaantiise
Gobanimadii raadshoo dadyahow gacal walaalooba
Goballada mideeyoo dadyahow daaya kala goynta
Gacansiiya kuwa maqan intay gaarayaan hadafka
Guushana Ilaah baa hayee midnimo talo ku soo gooya.
Cumar Cabdinuur – Nabaddoon
QANYARE SIDUU RABO HA LOO YEELO!!